Sharaxaad ka bixi waxa uu yahay jilitaanka caafimaad
Faham saamaynta ay arrimaha bani'aadamku ku leeyihiin muuqaalka khaladaadka
In la falanqeeyo sida ay wax u dhaceen iyo wejiyadooda kala duwan
Ogow hababka jilitaanka ee kala duwan
Faham socodka fadhiga jilitaanka oo dhammaystiran iyo doorka wejiyada kala duwan
Ogow marxaladaha kala duwan ee xog-wareysiga iyo doorarkooda
U fahma qiimaha wax ka sheegid si caqli-gal ah
Ogow tillaabooyinka lagu abuurayo koorsada tababarka
Ogow tillaabooyinka abuurista xaalad-jilid
Koorasku wuxuu ujeedkiisu yahay in lagu fahmo jilitaanka macnaha guud ee daryeelka caafimaadka. Waxaad ogaan doontaa asalkeeda, dhaqamadeeda wanaagsan, aaladaha kala duwan ee loo adeegsado si wanaagsan, iyo sidoo kale faa'iidooyinka ay bixiso sida qalab waxbarasho. Waxaad sidoo kale fahmi doontaa doorka jilitaanka caafimaadku ka ciyaari karo maaraynta tayada iyo badbaadada daryeelka.
Fiidiyowyo sharraxaya, waraysiyo iyo jimicsiyo, waxaad ku ogaan doontaa fikradaha aragtiyeed ee la xidhiidha jilitaanka, laakiin sidoo kale tusaalayaal codsi ah.
Jilida caafimaadka: adiga ayay kugu xidhan tahay! Diisambar 18, 2021Tranquillus
READ Aasaaska habraaca dambiyada
horeFahamka sharciga qandaraasyada shaqada